राष्ट्रपति भण्डारी माथि प्रश्न चिन्न खडा ? पदमुक्त भइसकेका पराजुलीबाट राष्ट्रपतिले लिएको सपथ वैधानिक कि अवैधानिक::Nepal's Online News Portal
राष्ट्रपति भण्डारी माथि प्रश्न चिन्न खडा ? पदमुक्त भइसकेका पराजुलीबाट राष्ट्रपतिले लिएको सपथ वैधानिक कि अवैधानिक
फागुन ३०, काठमाण्डौ । नवनिर्वाचित राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले पदमुक्त भइसकेका प्रधानन्यायाधिश गोपाल पराजुलीबाट पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएकी छन् ।
यद्यपी प्रधानन्यायाधीसले पदमुक्त भएको पत्र औपचारिक रूपमा नबुझिन्जेलसम्म उनले गरेका कामकारवाही पदीय हैसियतमै बसेर गरेको मानिने कतिपय संविधानविदले बताउने गरेका छन् ।